အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: နွေးထွေးသော နေရာလေးတစ်ခုဆီသို.
... 10:43:00 PM
ဟော်ဗျာ... ကိုမင်းအိမ်ဖြူကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီ.. ကျွန်တော် “နွေးထွေးတဲ့ဘ၀လေးတစ်ခု” က မပြည့်စုံသေးဘူးဗျ.. အခုလို ကျွန်တော်ကို အရောက်ပို့ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။ ဒါပေသည့် မပြည့်စုံသေးတဲ့ ကျွန်တော် ဘ၀လေးထဲကို အလည်လာတဲ့သူတွေက တစ်ခုခု အလိုမကျတာများရှိခဲ့ရင် ကိုမင်းအိမ်ဖြူကပါ ၀ိုင်းဝန်း တောင်းပန်ပေးဖို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေနော်...
21 June 2009 at 11:18 PM
ကိုမင်းအိမ်ရေ ... မြန်မာဖောင့်ရိုက်နည်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ကိုယ်တွေလည်း စမ်းတဝါးဝါးဘဝက အစပျိုးခဲ့ရတာမို့လို့ အခက်အခဲကို နားလည်ပါတယ် ... အခုလို မြန်မာဖောင့် ရိုက်စအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံလေး တစ်ခု ပြုခဲ့ချင်ပါတယ် .. ဒါကလည်း သိလွန်းတတ်လွန်းလို့ ပြောတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... ဘာလို့ ကျွန်တော် ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ မြန်မာဖောင့်ရိုက်စ ကာလမှာ ကီးဘုတ်ပေါ်လက်အတင်အနေအထား စာလုံးအမှားယူလိုက်မိတာနဲ့ အသားကျသွားခဲ့ရင် နောက်ပိုင်း typing စာလုံးအမှန်ကို သိတဲ့အခါ ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် အချိန်အရမ်းကြာမြင့်သွားမှာ စိုးလို့ အကြံပြုခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ...
တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုမင်းအိမ်ရေ ... အောက်ကမြင်ရိုက်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ ...
ကိုမင်းအိမ်ရဲ့ ပို့တော်တော်များများမှာ အောက်ကမြင် (့  ) ရိုက်တာလေးတွေ လွဲနေတာတွေ့ရပါတယ် ... ဥပမာ ...
အရောက်ပို. နဲ့ အရောက်ပို့ မှာ
ပို့ဆိုတဲ့ စာလုံးကို သေသေချာချာလေးကြည့်ပေးပါ ... ကိုမင်းအိမ်ရိုက်တဲ့ ပို့က အခုလို " ပို. " ဖြစ်နေပါတယ် ... မြန်မာစာလုံးပေါင်းမှားတာ မဟုတ်ပေမယ့် လက်ကွက်မှားတာပါ ... ကိုမင်းအိမ်ရိုက်တဲ့ အောက်ကမြင်လက်ကွက်က ( dot " . " ) ကို ရိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ် ... အမှန်က အောက်ကမြင် လက်ကွက်က Shift+U ဖြစ်ပါတယ် .. အဲလို ရိုက်တော့မှ ခုနက dot ( . ) နဲ့ရိုက်တဲ့ နေရာမှာ ခုလိုမျိုး " ပို့ " ဆိုတာ ဖြစ်မှာပါ ...
ဘာထူးခြားမှု ရှိသလဲ .. ဒါကမေးစရာ ရှိလာပါတယ် ... မြန်မာစာ မြန်မာစကားမှာ အောက်ကမြင်က သာမာန်စာလုံးနဲ့ ရေပြင်ညီ တစ်တန်းတည်းမှာ မရှိပါဘူး ... အောက်ကို နဲနဲလေး ကျပါတယ် ... အဲ့ကြောင့်မို့လို့ လက်ကွက်လေးကို ခုတည်းက ပြင်စေချင်လို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဝင်ရောက်ကောမန့်ပေးခဲ့ပါတယ် .. :D
သိလို့တတ်လို့ ပြောတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ... ကိုယ်သိတာလေး တစ်ခုကို ဝေမျှတဲ့ သဘောပါ ... ကိုမင်းအိမ် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ ..
ညီမင်းအိမ် "ယုယ နွေးထွေးသော ဘ၀လေး တစ်ခုဆီသို့" နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
22 June 2009 at 1:17 AM
အပုဒ်တိုင်းကို ကောင်းကောင် မကောင်းကောင်းအားပေးတယ်လို့ မပြောပါနဲ့ လေ။
သက်ရောက်မှုတစ်ခု အမြဲရှိတဲ့ စာတွေကို စာမရွေးဘဲဖတ်တယ်ပြောပါ...
22 June 2009 at 6:20 AM
but, color ကြောင့် ဖတ်ရတာ မျက်လုံးငြောင်း သလိုပဲနော်
22 June 2009 at 11:54 AM
ကိုယုယရေ မပူပါနဲ့ ကျွန်တော်ရှိပါတယ် ၊၊ ရိုက်ပေါက်ဆိုရင်တော့ ပြေးပြီ P:
ကိုနေဒေးသစ်ရေ Thousands Thanks !
ကိုကြီးမိုးကုတ်သား သွားဖြစ်အောင်သွားနော် P;
မယ်ကိုးရယ် သိတာပေါ့ D:
DeeDeeLwyn ရေ ကျွန်တော်လည်း ပြောင်းဖို.စဉ်းစားနေပါတယ် ....
22 June 2009 at 1:35 PM
စာလုံးပေါင်းမှားရင် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ်နော်။ :)
22 June 2009 at 2:03 PM
အယ် ကိုမင်းအိမ်ဖြူကြီးရေ လာတယ်နော် သိလား ညီမကို ဘိတ် ဆုပေးနော် အဟီးးး အမြဲနောက်ကျလို့ ဟဟဟဟ မအားဘူးရယ် သိလား အခုလဲရှုတင်ရှိသေးတယ်နော် လော ၃ လောနဲ့ ဖတ်သွားတယ် မအားနိုင်ဘူး အမြဲရယ် စိတ်ကိုပိန်ရောပဲ ဘယ်လိုများ အားအောင် လုပ်ရပါ့မလဲ မသိ အင်းးးးးးးး
ဟဟဟ စာလုံးပေါင်းမှားတာ ထောက်ပြတာပါ နော် ခိခိ နောက်လဲ ပြောဦးမယ် သိလားးးး
22 June 2009 at 2:08 PM
လာဖတ်သွားတယ်နော် ..... လည်စရာတစ်အိမ်တိုးတာပေါ့ ... သွားလည်ပါ့မယ်ဗျာ ...
(အဟီး ...နံမည်လေးပါချင်လို့လေ ... ဒီလိုရေးမှ ရမှာမို့ပါ ... ဘမ်းကျော်နေရလို့လေ :P)
22 June 2009 at 4:47 PM
Bank account ပေးပါ ကိုဗီလိန် ငွေတွေပိုနေလို. အဟ
ငှက်ကလေးရေ နောက်တခါ ကားရိုက်မအားရင် စာတွေ လာပြမယ်လေ နော် ..... အရမ်းတော့မလောနဲ့
23 June 2009 at 4:20 PM